AmaProteas akhale ngaphansi kwiPakistan eCenturion - Impempe
AmaProteas akhale ngaphansi kwiPakistan eCenturion
UFakhar Zaman wePakistan uphinde wagqama behlula amaProteas
IPakistan ikhale yemuka nendebe yochungechunge lwemidlalo yosuku olulodwa ngemuva kokushaya iNingizimu Afrika ngama-run angu-28 emdlalweni wesithathu eSuperSport Park, eCenturion, ngoLwesithathu.
Ngokuwina umdlalo wayizolo iPakistan ithathe uchungechunge ngo 2-1. Emdlalweni wokuqala kuwine yona iPakistan eCenturion, kwathi kowesibili kwawina iNingizimu Afrika eWanderers Stadium. Umdlalo wangoLwesithathu iwona obese kumele ucacise iqembu ebelizowina uchungechunge njengoba kuwine iPakistan.
AmaProteas awine ithosi akhetha ukushwiba kuqala okokuqala kulolu chungechunge lwemidlalo emithathu. IPakistan iqale kahle kakhulu njengoba engazange awe amawikhethi ngasekuqaleni. UFakhar Zaman uphinde wadlala kahle kulo mdlalo eshaya ama-run angu-101.
Omunye umdlali oshaye into ecokeme lapha uBabar Azam ophume esehlanganise ama-run angu-94. U-Imam Ul-Haq wenze ama-run angu-57 waphuma. Ngasohlangothini lweNingizimu Afrika uKeshav Maharaj uthathe amawikhethi amathathu wadedela ama-run angu-45, kwathi u-Aiden Markram wathatha amabili wangenelwa ama-run angu-48.
Iphendula iNingizimu Afrika akuhambanga neze kahle njengoba uMarkram esheshe waphuma esenze ama-run angu-18. Umdlali owenze kangcono uJ Malan ohlanganise ama-run angu-70. U-Andile Phehlukwayo uzamile kodwa waphuma esenze ama-run angu-54.
Okuphawulekile kulo mdlalo ukuthi amaProteas abexega kakhulu njengoba bebengekho oKagiso Rabada, Lungi Ngidi, Quinton de Kock, Anrich Nortje noDavid Miller asebeyodlala kwi-Indian Premier League (IPL) ka-2021 e-India.
NgoMgqibelo kuzoqala imidlalo yeT20. Kuzodlalwa emine isiyonke kanti yonke izodlalelwa eCenturion naseWanderers Stadium, eGoli, ngenxa yokusabela isimo seCoronavirus.
Previous Previous post: Koshiyana umshefezo kwiGladAfrica Championship
Next Next post: UMcCarthy uvuma ulobi ngomsebenzi weBafana